Tromboblebitis - soritr'aretina
Raha ny marina, ny aretina aterany dia singa roa maromaro: ny fiterahana ny rindrin'ny venezy sy ny fananganana ny lozam-piaramanidina, izay manasitrana ny rà mandriaka. Misy ny dingana miavaka sy maharitra, ary amin'ny farany dia sarotra ny mamantatra ny trombôbitis - ny soritr'aretina dia tsy aseho na tsy misy akory aza. Ankoatra izany, ny loza aterak'io aretina io dia ny fahatsapana fa mety hitranga na any amin'ny lalan-dàlan-kibo aza, rehefa tsy misy fahasarotana ny fitsaboana, ary any amin'ny lalina lalina - dia miafina.
Ny soritr'aretina goavam-be amin'ny tendrony ambany sy ambony
Voalohany indrindra, misy ny aretina mampihorohoro eo amin'ny sandry na tongotra voatsindrona, izay mihamitombo amin'ny asa atao sy ny fandehanana. Ny olona sasany dia mahatsapa ny fahatsapana hafahafa rehefa manenina ny vina sy ny faritra eo akaikiny.
Ny hoditra mandrakotra ny lalan-drà dia ny hyperemia, izay manome ny làlana ho an'ny hematomas sy mangana. Ankoatra izany, amin'ny tsy fisian'ny fitsaboana mety, ny hoditra dia mahazo loko manga mainty.
Ny soritr'aretin'ny trombôbita dia miseho ihany koa amin'ny fiakaran'ny hafanana, na ny vatana manontolo (hatramin'ny sarany ambany) sy ny toerana misy azy, eo ambonin'ny toerana misy ny fakana aotirisy.
Miaraka amin'ny faharesen'ny lalan-dava lalina, dia misy vovoka kely izay mety hanjavona amin'ny maraina.
Diniho ankehitriny ny famantarana ny aretina, manavaka ny endriny samihafa sy ny dingana amin'ny antsipiriany.
Ny tromboblebitis amin'ny tanana - soritr'aretina
Tsara homarihina fa mihamitombo hatrany ny aretina any amin'ny fara-tampony ambony ary tena mampidi-doza. Ny zava-misy dia ny trombophlebitis dia afaka mamakivaky ny faritry ny tendany sy ny tratrany, ary izany dia miteraka tsiranoka ny havokavoka ary mety ho loza mety hitranga.
ny fihenanam-pandehan'ny vina amin'ny fanabeazana sodònina;
Fanadiovana ny hoditra 15-20 sm eo ambonin'ny vina voakasik'izany;
kely hematomas, tambajotra vascular ;
ny fihetseham-po mirehitra na ny fiakaran'ny hafanan'ny hoditra manodidina ny vinaingitra marefo.
Symptoms of thrombophlebitis of the legs
Amin'io tranga io dia samy hafa ny famantarana ny aretina miankina amin'ny endriny, ny toerana misy azy ary ny toetoetran'ilay fianarana. Ny piozolojia faran'izay tsotra indrindra ao amin'ny dingana an-dalam-pandrosoana izay misy vina voakasik'izany.
Ny soritr'aretin'ny tremboflebitika miverimberina:
voina varikose , voambolana;
Fampitomboana mavesatra ny mari-pahaizana amin'ny vatana, avy amin'ny 38 degreao sy ambony;
Mafy ny fanaintainana eo amin'ny lalan-drivotra, indrindra fa ny hikendry sy ny mandeha;
ny moka sy ny fivoahana amin'ny vatan'ny rantsambatana;
Ny fihenan-damba eo amin'ny fingadona dia mafy sy mihalehibe.
Ny soritr'aretin'ny valanaretina lalina amin'ny fiafaran'ny faravodilanitra:
fanaintainana (raspirayuschaya) ao amin'ny gastrocnemius;
Omeo, indrindra rehefa miala amin'ny tongotra ny tongotra;
kofehy manga eo amin'ny hoditra;
Mitarika aretim-panala mahery vaika amin'ny fanasitranana ny tibia eo anoloana sy aoriana, ary koa mandritra ny fitsapana.
Ny toerana tena mampidi-doza ny trombophlebitis ao amin'ny faritra ambany amin'ny vatana dia ny segondra ileum-femoral, satria ny trombi voavolavola ao amin'io faritra io dia mitory lehibe. Mandritra izany fotoana izany, tsy misy soritr'aretina miharihary ary ny marika tokana dia ny pneoma embolism.
Mifindra monina ny trombôbitis - soritr'aretina
Izany dia endrika tsy fahita firy ny aretina, izay mitranga, amin'ny ankapobeny, amin'ny lehilahy raha kely indrindra.
Ny famantarana ny karazam-pitaovana dia mitovy amin'ny fitsaboana hafakely, saingy ny soritr'aretina dia miseho amin'ny tendro (ambony na ambany), avy eo amin'ny faritra hafa any amin'ny faritra samihafa. Mandritra izany fotoana izany, ny toetry ny fahasalaman'ny marary dia mitoetra ao anaty fetra mahazatra, toy ny faharetan'ny vatana.
Ankoatra izany, ny karazam-pihetseham-pihetseham-pihetseham-po dia tsy miankina amin'ny vina, fa ny arteries akaiky ihany koa.
Laparoskopy - inona ary izany, nahoana ary ny fomba itrangan'izany?
Ny fatorana eo amin'ny lohalika - ahoana no hisafidianana?
Fihetseham-pandehan'ny tsiranoka - soritr'aretina
Eczema amin'ny tongotra - miteraka sy fitsaboana amin'ny fomba rehetra azo atao
Ahoana no fomba fitsaboana ny anemia?
Skirt-bell - fifantenana ny modely sy sary tsara indrindra
Ny antony mahatonga ny tsy fahasalamana, izay zava-dehibe ho an'ny rehetra
Nitsidika ny ranomasimbe tany New Orleans i Megan Fox miaraka amin'ny namana
Mick Jagger dia nanao sonia fifanarahana tamin'ny renin'ny reniny ho avy
Karazan-tsakafo misy kalsioma
Macaroni miaraka amin'ny atody sy ny sigara
Tsaramaso sy tsakan-banana
Fitomboana an'i Tom Cruise
Hairstyle Evening 2014
Krèmaketa tsy misy menaka ao an-trano
Fanomezana ho an'ireo zazavavy adolescent
Azoko atao ve ny mametraka plastika amin'ny laminasa?